जान्नुहोस् ! ज्योतिषशास्त्रका अनुसार कुन राशिको सेक्स चाहना कस्तो हुन्छ भनेर ?
डिसेम्बर 30, 2018 साइन्स इन्फोटेक	1 Comment ज्योतिषशास्त्र, राशि, सेक्स चाहना
कुन राशिको सेक्स चाहना कस्तो ? हरेक प्राणीलाई सेक्स आवश्यक छ । त्यसमाथि मानिसलाई अझै आवश्यकताको महसुस प्राकृतिक रुपले पनि गराउँछ । यौन सम्पर्क मानिसका लागि आवश्यक र प्राकृतिक क्रियाकलाप पनि हो । सेक्स चाहना जगाउने अहिले आधुनिक समाजमा विभिन्न माध्यमहरु छन् । तर, पनि केहीलाई भने यसको रुची नहुन सक्छ । यो समस्या हो, स्वभाविक होइन । सेक्सको चाहना हुनु स्वभाविक मानिन्छ ।
हामी सबैलाई थाहा छ एक ब्यक्ति अर्को भन्दा फरक हुन्छ । मानिस अनुसार रुचि पनि फरक-फरक हुन्छन् । कसैलाई गुलाफ मनपर्छ त कसैलाई गुराँस । कसैलाई गुलियो खान मनपर्छ त कसैलाई नुनिलो । यसैगरी यौनिक मामलामा पनि मानिसहरुमा फरक-फरक गुण र ब्यवहार हुन्छन् । कसैलाई यौन सम्बन्ध राख्दा सादा तरिका मनपर्छ भने कसैलाई विभिन्न तरिका अपनाउन मनपर्छ । कसैलाई कामुक कुराकानी मनपर्छ भने कसैलाई एक अर्कालाई हेरे मात्र पुग्छ । ज्योतिषशास्त्रका अनुसार यौनिक ब्यवहार फरक हुनुको कारण राशि हो ।
१. मेष राशिका मान्छे छिट्टै आवेशमा आउँछन्
मेष राशिका मानिसमा कामुकता अत्याधिक हुन्छ । तर लामो समयसम्म यौन सम्बन्ध राखिरहन भने मन पराउँदैनन् । यो राशिका मानिसहरु कम समयमा धेरै यौनिक आनन्द लिनेमा विश्वास गर्छन् । यौन सम्बन्ध राख्ने वेलामा यिनीहरु आतुर हुन्छन् ।
२. वृष राशिलाई चुम्बन मनपर्छ
वृष राशिका ब्यक्ति धैर्यशाली हुन्छन् । यिनीहरु आवेशमा आउँदैनन् । चुम्बन यिनीहरुलाई निक्कै मनपर्छ । यिनीहरुले यौन सम्बन्ध लामो बनाउन चाहन्छन् र एक अर्कालाई माया गर्नुपर्ने चाहन्छन् । यिनीहरुलाई यौन सम्बन्धका लागि पहल गरेको मनपर्छ ।
३. मिथुन राशिलाई प्रेमालाप मनपर्छ
यो राशिका मानिस भावुक र मानसिकरुपमा संवेदनशील हुन्छन् । यिनीहरुको यही स्वभावका कारण यौन आनन्द त्यति लिन सक्दैनन् । यिनीहरुलाई आफ्नो पार्टनरको भन्दा पनि आफ्नो खुसी बढी महत्वपूर्ण हुन्छ । यो राशिका मानिसहरु प्रेमको आनन्द लिन जान्दैनन् र जीवनमा कमि महसुस भईरहन्छ ।
५. सिंह राशिले पर्खिन्छन् पार्टनरको इशारा
६. कन्या राशिमा यौनप्रति विशेष रुची
यो राशिका मानिस केही लाज मान्ने स्वभावका हुन्छन् । यिनीहरुले प्रेमी प्रेमिका वा पति पत्नीसँग प्रेम ब्यक्त गरि हाल्दैनन् । यद्यपी चासो भने निक्कै धेरै हुन्छ । यो राशिका मानिस यौन सम्बन्धको बेला समय बर्बाद गर्दैनन् । प्रेमप्रति भने पुरै इमान्दार हुन्छन् । तर मुडी स्वभाव भने हुन्छ ।
७. तुला राशिका मानिसमा सम्बन्ध बढाउने चाहाना हुन्छ
यो राशिका ब्यक्ति आफ्नो पार्टनरको खुसीमा ध्यान दिन्छन् । प्रेम सम्बन्धका लागि दवाव पनि दिँदैनन् । साथीको इच्छा अनुसार तयार हुन्छन् । तुला राशिको स्वामी शुक्र भएका कारण यिनीहरुप्रति मानिस आकर्षित भैहाल्छन् । यिनीहरुलाई यौनक्रिडाको समयमा कुराकानी गर्न मनपर्छ ।
८. वृश्चिक राशिमा कामुक भावनाप्रवल हुन्छ
९. धनु राशि जतिबेला पनि यौनका लागि तयार
१०. मकर राशिलाई चुम्बन मनपर्छ
११. कुम्भ राशिलाई प्रेममा नयाँ नयाँ प्रयोग मनपर्छ
१२. मीन राशिको सम्बन्ध सुखद र आनन्ददायक हुन्छ
← दाँतको बीचमा खाली ठाउँ हुने मानिसको स्वभाव
शास्त्र अनुसार महिलाले बिर्सेर पनि गर्नु नहुने कामहरु →
One thought on “कुन राशिको सेक्स चाहना कस्तो ?”
Pingback:महिला र सेक्स कमजोरी